Bogga ugu weyn 10 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Bixin Karo Miisaanka 2022 -ka
Miisaanka Miisaanku Ma Shaqeeyaa?
Intee In le'eg Ayaan Ka Samayn Karaa Madashan?
Sidee ayay u shaqeeyaan Madashan?
#1 Mushahar Caafimaad Leh
#2 Abaalmarinta Hadhaaga Walgreens
#7 App Sweatcoin
#8 Heshiiska Jimicsiga
Ma ogtahay in lagu siin karo lacag si aad miisaankaaga u yaraato? Waxay u egtahay mid qosol leh?
Helitaanka lacag -dhimista miisaanka si fudud micnaheedu waa,, miisaanka oo yaraada waa lacag la helay. Wali miyaad ku fikireysaa inaad ka tanaasusho miisaan lumis? Anigu ma sharad.
Halkan hoose thewealthcircle.com, kaliya kuma bari doono miisaanka oo yaraada, laakiin waxaan sidoo kale sii wadi doonnaa inaan kugu wargalinno dakhliga dadban ee aad sameyn karto adigoo miisaankaaga dhimaya.
Caafimaad ahaan, marka aan ka hadlayno dhimista miisaanka, waxaynu sawirnaa hoos u dhaca cufka, dareeraha, iyo dufanka guud ee jidhka. Arrinta miisaan dhimista ayaa had iyo jeer si joogto ah u soo baxda, maadaama aanay ahayn sifo soo jiidasho leh ama la adkeeyo, gaar ahaan marka buurnidu dhacdo.
Qaar badan ayaa farsamo ahaan lagu meeleeyay shuruudo cunto gaar ah si loo hubiyo miisaanka xad-dhaafka ah. Sidoo kale, dad badan ayaa ku xalliyay jimicsi caadi ah oo qasab ah si ay u lumiyaan rodol oo hilib ah.
Waxa xiisaha lihi waa in lagu siin karo lacag dhimis. Hadda kaliya kuma ekaantid jimicsigaaga caadiga ah ama cuntada, waxaad heleysaa lacag caddaan ah oo dhab ah si aad u sameyso.
Sanadihii la soo dhaafay, dhiirrigelinta maaliyadeed ee luminta miisaanka ayaa caddeeyay inay shaqeynayaan sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay Jaamacadda Carnegie Mellon (dheeraad ah halkan ka akhriso).
Cilmi-baaristu waxay ogaatay in abaalmarinta maaliyadeed ay ku dhiirrigelisay ka-qaybgalayaashu inay lumiyaan miisaan ka badan kooxda xakamaynta, laakiin waxay isla markiiba dib u heleen ka dib siddeed toddobaad oo ah dayactirka miisaanka oo yaraada. Daraasaddu waxay ku talisay dhiirrigelinta muddada-dheer.
Haddii aad go'aansato inaad lumiso miisaankaaga oo aad taam ahaato, aaladahaani aad bay diyaar u yihiin inay kaa bixiyaan.
Markaad dhammaystirto dhaqdhaqaaq jireed oo gaar ah oo ka jira meelahan, waxaad samayn kartaa ilaa $ 10,000. Haa, waxaan aad ula jeedaa $ 10,000 ku shub koontadaada bangiga.
Qabashada halkan waxa ay la mid tahay kula tartaminta naftaada. Sida dhufto ee qaar ka mid ah ay isticmaalaan nidaamka sharadka ah nooca. Tusaale ahaan, waxay odhan karaan, waxaanu sharad ku galnay $1000 ma lumin kartid qaddar go'an oo miisaan ah muddo 7 maalmood gudahood ah. Habkani wuxuu ku nool yahay adiga oo u heellan oo edbin leh oo indho ku leh taajka.
Websaydhada iyo barnaamijyada luminta miisaanka ayaa kuu oggolaanaya inaad ku khamaarto miisaankaaga oo yaraada ama dhammaystirto dhaqdhaqaaq jireed oo gaar ah. Taas micnaheedu waa inaad ku abaalmariso inaad gaarto hadafyadaada (oo lagu ciqaabo inaad seegto).
Qaar ka mid ah aaladaha tartanka miisaanka yaraanta ayaa ku deeqi doona macaashka mushaharka lumay sadaqo. Halka kuwa kale ay ku siin doonaan sharadkaaga isticmaaleyaasha gaadhay himilooyinkoodii.
Akhri la xiriira: 15 Fikradaha Dakhliga Dakhliga Ugu Fiican ee Lacag La Helo Markaad Hurdo. 11 meelood oo aad lacag ku heli karto si aad u tijaabiso alaabta guriga
Markaan ku siinayo sirahaas dakhliga, waxaan kaa filayaa inaad si taxaddar leh u dhex marto, oo aad tijaabiso hal ama laba ikhtiyaar. Waa la xaqiijiyay oo waa la xaqiijiyay, markaa si kalsooni leh ayaad dunta u geli kartaa. Waxaa lagu siin karaa lacag si aad miisaankaaga u lumiso keligaa ama koox saaxiibbo ah, in kasta oo ay ku xiran tahay goobta cuntada aad doorbidayso.
Waxay ilaalinayaan booska ugu sarreeya sababtoo ah joogteynta iyo caannimada, iyagoo ballanqaadaya abaalmarin lacageed haddii aad la kulanto yoolalkaaga. Goobtu waxay leedahay ballan fudud, haddii aad lumiso 10% miisaanka jidhkaaga muddo lix bilood ah, waxaad isla markiiba ku guulaysataa $100.
Waxaa jira khidmad gelitaanka qiyaastii $25 bishiiba caqabadaha kooxda. Oo waxaad dooran kartaa inta aad rabto inaad sharad ku sameyso haddii aad doorbideyso inaad naftaada ku sharad gasho oo aadan ku biirin tartan.
Waxaa jira markhaatiyaal badan oo ku yaal goobta shakhsiyaadka ku guuleystay ilaa $1,000 ama ka badan. Oo ay weheliso luminta xaddi la taaban karo oo miisaan ah. HealthyWage waxa ay ilaa hadda ku abaalmarisay in ka badan $430,000 ragii rajeenaya miisaan dhimista kuwaas oo lumiyay in ka badan 860,000 rodol.
Haddii aad maskaxda ku hayso culeys yool, naftaada u sharad si aad u garaacdo bartilmaameedkaaga HealthyWage.com. Si fudud u geli culeyska yoolkaaga iyo taariikhda bartilmaameedkaaga 6 bilood oo ka baxsan ama ka badan. Kadib geli stats -kaaga (jinsiga, da'da, miisaanka, iwm). Dooro qaddarka doolarka si aad sharad u gasho bil kasta, geli faahfaahinta lacag -bixinta, markaa waad gashan tahay.
Haddii aad gaarto hadafyadaada, waxaa lagu siin karaa lacag caddaan ah - jeeg ama Paypal - ama waxaad ku dooran kartaa amaah Amazon.
#2 Walgreens Balance Abaalmarinta
Markaad ku nooshahay meel u dhow Walgreens Balance Rewards outlet, markaa waxaad fursad u heleysaa inaad lacag ku hesho si aad miisaanka u dhinto markaad isqorto barnaamijkooda miisaan lumis.
Si ka duwan HealthyWage, Walgreens Balance Rewards waxay siisaa dhibco daacadnimo dabeecado iyo waxqabadyo caafimaad oo kala duwan. Qodobbadaas daacadnimada ah waxaa laga yaabaa in loo beddelo lacag taas oo aad ku isticmaali karto goob Walgreens kasta ama iibsi onlayn ah.
Waxay ku siin doonaan dhibco hawlo kala duwan oo caafimaad qaba ama hawlo aad dhamaystirto sida miisaan, gaarista yool caafimaad, jimicsi, sigaar la'aan, socod, baaskiil wadid, orod. iwm. Buuxi caqabadahan caafimaad si aad u hesho dhibco toddobaad kasta. Ogowna, 1,000 kasta oo dhibco ah oo aad kasbato waxay kaa helaysaa $1 laga dhimay iibka Walgreen.
Waxaad google ka geli kartaa meesha kuugu dhow ee kuugu dhow oo aad ka bilaabi karto goobada aad ku kasbato.
Kani waa barnaamij jiil cusub oo lacag badan ku siinaya inaad miisaankaaga iska dhinto. Barta iibinta gaarka ah ee FitCoin kuguma abaalmarinayso lacag caddaan ah, laakiin BitCoins beddelkeeda. Intee in le'eg ayaad ku hawlan tahay dhaqdhaqaaq jireed oo gaar ah ayaa si ku -meel -gaar ah u go'aamin doona xaddiga dakhliga aad hesho.
Si aad ugu biirto FitCoin waa inaad soo dejisaa barnaamijka macruufka. Ka dibna u samee koonto bakhaarkaaga Bitcoin, oo geli faahfaahintaada shaqsiyeed. Dejinta ka dib, waa inaad u dhigtaa barnaamijka mid kasta oo ka mid ah raadraacayaasha jirdhiska ee u qalma oo leh shaqeynta raadraaca garaaca wadnaha. Waxaad ku dhejin kartaa FitCoin FitBit, Garmin, Atlas, Mio, iyo Jawbone, iyo kuwo kale.
In kasta oo ay ku siiyaan waxoogaa cents ah hawlihii la dhammaystiray, waxaan u malaynayaa inay weli mudan tahay in la isku dayo.
DietBet waxay aad ugu egtahay HealthyWage, waxaad ku kasban kartaa lacag miisaan luminta DietBet adiga oo ku sharadanaya naftaada si aad miisaanka u dhinto. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah in DietBet ay ku siiso noocyo kala duwan xulashooyinka tartanka miisaanka-luminta. Iyada oo tartamo kala duwan ay socdaan mar walba-xoogaa waqti gaaban iyo qaar dheer. Adiguna waxaad dooran kartaa inaad abuurto ciyaartaada khamaarka oo aad dadka ku martiqaado inay ku soo biiraan, ama baarto goobta oo aad hesho cayaaraha sharadka ee aad rabto inaad ku biirto.
Dhammaan ka qaybgalayaashu waa inay tuuraan khamaar ugu yaraan $10, iyo dhammaadka sharadka, dadka la kulmay hadafyadooda waxay helayaan inay kala qaybiyaan lacagta caddaanka ah. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii aad ku biirto tartanka lacag dhan $10, waxaad filan kartaa inaad ku guulaysato qiyaastii $15-$20. Lacag-bixinta waxaa lagu bixiyaa Paypal.
Dietbet wuxuu bixiyaa saddex caqabadood oo miisaan lumis ah: Kickstarter, Transformer, iyo Daryeelaha.
Kickstarter oo soconaya afar todobaad wuxuu u baahan yahay inaad lumiso ugu yaraan 4% miisaankaaga jirka. Khidmadaha gelitaanka way kala duwan yihiin tartan kasta, laakiin celceliska sharadku waa $30.
Transformer-ka soconaya 6 bilood, wuxuu u baahan yahay inaad lumiso ugu yaraan 10% miisaankaaga. Waa inaad bixisaa $25 bishii ama aad bixiso $125 lacag hal mar ah. Caqabaduhu waxay ka kooban yihiin lix wareeg oo fidsan lix bilood, iyada oo wareeg kasta uu u baahan yahay inaad lumiso boqolkiiba miisaanka jidhka.
Ilaaliyuhu wuxuu u furan yahay tartamayaasha horay miisaanka uga lumiyay barnaamijyada Kickstarter ama Transformer. Barnaamijkani waxa uu u baahan yahay in aad miisaankaaga ku ilaaliso marka lagu daro ama laga jaro 2% miisaanka jidhkaaga. Kharashka gelitaanka waa $25 bishii ama $225 hore.
Marka tartanku dhammaado, ka -qaybgalayaasha guuleysta waxay helayaan inay kala qeybsadaan 85% lacagta tan iyo markii Dietbet uu gooyay. Haddii dad badani ku waayaan tartanka aad ku biirto, lacag badan ayaad heleysaa si aad guriga u qaadato. Tani waa madadaalo dhab ah!
Midkani wuxuu la mid yahay DietBet iyo HealthyWage (kor ku qoran). Haddii orodka uu qayb weyn ka yahay barnaamijka jimicsigaaga, markaa RunBet ayaa ah meesha kuugu fiican. Hadafku waa inaad ka dhigto socodsiinta caado leh dhiirigelin lacageed si ay kaaga caawiso hubinta inaad ku dhegto.
Tusaale ahaan, hal ciyaar waxay qaadatay muddo lix toddobaad ah iyo $ 40 oo ah khidmadda gelitaanka. Ciyaartan, ka -qaybgalayaashu waxaa laga rabay inay ordaan afar jeer toddobaadkii iyagoo ugu yaraan 10 daqiiqo halkii mayl.
Ka -qaybgalayaashu waa inay si guul leh u dhammaystiraan jadwalka orodka muddo lix toddobaad ah si ay u helaan qaybtooda dheriga. Iyada oo ay ku jiraan 45 ciyaartoy tartanka, cabirka dheriga ayaa gaaray $ 1,800. Dad badan oo ku jira tartanka ayaa guulaysta, saamigaaga dheriga ayaa yaraanaya. Haddii aad ku dhegto jadwalkaaga, waxaad ku guuleysan doontaa qayb ka mid ah khamaarka ciyaarta aad ku biirtay. Tani waxay la mid noqon doontaa sharadka aad gelisay oo lagu daray faa'iido.
RunBet wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku orodo bannaanka iyo gudaha, iyo xaqiijinta waxaa loo sameeyaa laba siyaabood. Socodka bannaanka waa in la dabagalo oo la duubo iyadoo la adeegsanayo app tracker app oo ay ku jiraan Strava, Runkeeper, ama Garmin Connect.
Kani waa App-ka kaa helaya lacag caddaan ah oo aad ku samaysay waxyaabo caafimaad leh sida la socodka tillaabooyinkaaga, cunista saxda ah, hurdo fiican seexashada, iyo wixii la mid ah. Laga heli karo labada aaladaha Android iyo Apple.
Guusha ayaa 100% bilaash u ah inay ku biirto, iyada oo aan loo baahnayn wax-iibsi gudaha-app ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad isku waafajiso app -ka jirdhiska ama aaladda la gashado si aad u bilowdo kasbashada dhibcaha; Waxaa lagu siin karaa lacag si aad miisaankaaga u dhimo adigoon xitaa ka fikirin.
Lacag -bixinta waxaa lagu bixiyaa Paypal ama deebaaji toos ah. 10,000 dhibcood oo kasta oo aad hesho waxay u dhigantaa $ 10 oo kaash ah.
Sweatcoin waa talefan bilaash ah oo ay heli karaan aaladaha Android iyo iOS kaas oo lacag ku siinaya inaad dibadda u baxdo. App-ka Sweatcoin wuxuu xisaabiyaa tirada tillaabooyinka aad qaado adigoo isticmaalaya xawaaraha casrigaaga iyo GPS-ka.
Appku wuxuu u rogaa tirada tillaabooyinkaaga Sweatcoins. Qabashadu waa in tillaabooyinkaaga lagu qaado dibadda si loo xisaabiyo dakhligaaga.
Waxaad ku soo furan kartaa Sweatcoins kaararka hadiyadda iyo baayacmushtarka sida iPhone cusub, dharka, ama fasallada jimicsiga, ama waxaad ku deeqi kartaa qadaadiicdaada samafalka.
Haddii aad ku raaxaysato garaacista jimicsiga had iyo jeer, abkan hubaal waa laguu dhisay. Gym Pact waa app kuu ogolaanaya inaad lacag samayso markaad jimicsiga ku jirto.
App-kan casriga ah waxa uu ku siinayaa dhiirigelin dhaqaale si ay kaaga caawiyaan in aad ku dhegganaato yoolalka jimicsigaaga. Way fududahay in lacag lagugu dhimo miisaankaaga GymPact.
Marka hore, isticmaalayaashu waa inay dejiyaan heshiis iyagoo galaya inta maalmood ee ay ka go'an tahay inay ka shaqeeyaan jimicsiga. Axdiga caadiga ah ee saddexda maalmood usbuucii ayaa ku heli doona $2.10 todobaadkii haddii aad si guul leh u dhammaystirto xidhmadaada. Waxa laga yaabaa in aad hesho $0.50 ilaa $0.75 jimicsi kasta.
Marka xigta waxa ay dejin doontaa lacagtaada. Barnaamijka caadiga ah wuxuu jeebka ka soo saari doonaa $5 jimicsi kasta oo aad seegto. Taasi waa ciqaab adag - mid aad u badan tahay inaad isku daydo inaad ka fogaato.
Waxaad markaa u baahan doontaa inaad ku xidho akoonkaaga Facebook oo aad geliso macluumaadka kaadhka deynta (abaalmarinta iyo ganaaxyada).
#9 Ku dheji
waa app kaa caawinaya inaad gaarto hadaf nooc kasta ah, ha ahaato miisaan lumis ama dhisme jirka muuqaalka macho. Isticmaalayaasha waa inay saxiixaan Qandaraasyada Ballan -qaadka oo leh lacag ku lifaaqan.
Haddii aad ku guuldareysato inaad gaarto hadafkaaga, lacagtu waxay ku dhici doontaa qof horay loo go'aamiyey, sadaqo, ama StickK lafteeda. Waxa kale oo aad dooran kartaa hay'ad samafal oo aan hadafkeedu taageerin xoogaa dhiirigelin dheeraad ah si aad u guulaysato.
Haddii aad doorato ballanqaad joogto ah, waa inaad soo gudbisaa warbixin toddobaad kasta si aad u cusboonaysiiso StickK horumarkaaga. Waxa kale oo aad dooran kartaa ballan qaad hal mar ah, halkaas oo aad ku soo wargelinayso dhammaadka. Sarkaalka StickK “garsoore” ayaa xaqiijin doona sheegashadaada.
Garsoorayaasha StickK ayaa ah kuwa go'aamiya haddii aad si guul leh u dhammaystirtay is-qoritaankaaga. Waxa xiisaha leh ayaa ah in garsooraha uu yahay qof aad taqaan, sida saaxiib ama lamaane.
Swagbucks waa goob abaal-marineed oo kuu ogolaanaysa inaad kasbato dhibco loo yaqaan Swagbucks si aad u qabato hawlo fudud sida dhamaystirka sahan, ciyaarista ciyaaraha, ama daawashada muqaalada. Waxaad ku soo furan kartaa Swagbucks kaaga kaadhadhka hadyada ama lacag caddaan ah adoo isticmaalaya PayPal. Qof walba wax baa u jira oo dhib malaha.
Sida cilmi -baaristu si cad u xaqiijisay in bixinta dadka si ay miisaanka u dhintaan ay u caddaatay inay aad u guulaysatay, markay lacagtooda ku shubaan, waxay u diidaysaa inay tallaabo qaadaan.
Iyada oo noocyo badan oo kala duwan oo ah barnaamijyada sharadka cuntada lagu kala doorto, kala -shaandhayntoodu waxay noqon kartaa jahawareer. Dooro dhawr oo ku dheji jadwalka jirdhiska maalin kasta si aad u hesho khibrad fiican.
Maqaalkani waxtar buu ahaa? Ha iloobin ilaa share la saaxiibadaa si iyaguna ay u kasban karaan inta ay ka shaqeynayaan.
Dib -u -Eegista Abaal -marinta 2022: ma sharci baa mise waa khiyaano | Abaal marin & Lacag Keydso
Faallooyinka HealthyWage 2022: HealthyWage ma sharcibaa? Sida ay u shaqayso
Noble waa Xamaasad Waxbarasho, Khabiir SEO, iyo La -taliye Maaliyadeed Kulliyad. Isagu waa aasaasaha NoblesoftDigital, Bloggerscrib, iyo Hoggaamiyaha Mawduuca ee Worldscholarshipforum.com. si aad wax badan iiga ogaato; https://about.me/akujobichijindu
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay kaararka hadiyadda GameStop? Sideen ku heli karaa kaarka hadiyadda GameStop? Waa maxay…